iMatchSkills.org Boorka shaqada ee ugu ballaaran ee Oregon. Waxaad ka heli kartaa shaqooyin, shaqobixiyeyaashuna way kaa heli karaan. Markaad macluumaad badan geliso heybtaada Shaqodoonka, ayaad si badan aad ugu muuqan kartaa shaqobixiyeyaasha. Diiwaangelin ayaa loo baahan yahay.
Barashada Shaqooyinka. Fursadaha barashada shaqada ee Oregon. Waxaad u codsan kartaa nooca shaqada, degmada, iyo bannaanida ahaan.
Daalaco Shaqooyinka Oregon. Eeg shaqooyinka ku jira WorkSource Oregon.
Boorka Career One Stop. Boor shaqo oo ay maalgeliso Waaxda Shaqada ee Mareykanka. Sahami xirfadaha, hel tababar, iyo wax badan.
Shaqooyinka Dawladeed. Raadi magaalada, degmada, Gobolka Oregon, federaalka, militariga, iyo shaqooyinka waxbarashada.
Isweydaarsiga Shaqaalaha Qaranka. U raadi shaqooyinka gobol ahaan, u daalaco shaqooyinka xubin shirkadeed ahaan, raadi shaqobixiyeyaasha u fiican halyeeyada. Shuraakada Ururka Qaranka ee Hay'adaha Shaqaalaha ee Gobolka.
Shaqooyinka Oregon ee QualityInfo. Tobanaan kun oo ah shaqooyinka ka jira Oregon. Waxaa maamula Waaxda Shaqada ee Oregon.
Shaqooyinka Gobolka Shaqooyinka. Ka raadi shaqooyin hay'adaha gobolka Oregon.
© 2021 Copyright Worksource Oregon | Siyaasadda asturnaanta